GUODA buru ibu maka ihe ndi ahia obula choro
Na nso nso a, igwe ụmụaka GUODA na-ere ọkụ na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia. Ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ ọtụtụ ngwaahịa anyị, dị ka igwe kwụ otu ebe ụmụaka, igwe kwụ otu ebe ụmụaka na igwe kwụ otu ebe na wiilị ọzụzụ, ọkachasị ụmụaka nwere ụkwụ atọ.
Ọtụtụ ndị ahịa anyị, ha na-ahọrọ ịhọrọ ụdị dị iche iche nke ngwaahịa ụmụaka anyị. Mepụta ọbụbụenyi azụmahịa ma nwekwuo nkwado. Anyị na-atụ anya inye ndị ahịa anyị niile ọnụ ahịa dị elu ma nwee ezi uche ma anyị na-eme nke ahụ.
E wezụga nke ahụ, ndị ahịa niile anyị nwere nkwado tupu oge ahụ, GUODA ga-eburu ibu ọrụ iji chebe ha pụọ ​​na ahịa na-adịghị agbanwe agbanwe ma gbalịa ike anyị niile iji zute ndị ahịa anyị chọrọ ịnyịnya ígwè, akụkụ igwe, e-igwe kwụ otu ebe, ngwa ahịa ụmụaka.
N'ikpeazụ, daalụ ọzọ maka ịhọrọ GUODA.